Lahatsary Fanadihadiana Mampiseho Ireo Mpianatra Makedoniana Miaina Anaty Trano Ratsy Na dia Teo Aza Ny Fampanantenan’ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Lahatsary Fanadihadiana Mampiseho Ireo Mpianatra Makedoniana Miaina Anaty Trano Ratsy Na dia Teo Aza Ny Fampanantenan'ny Governemanta
Voadika ny 03 Aogositra 2016 5:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, русский, Italiano, 日本語, English
Pikantsarin'ny “Rindrina maintso, Sakafo Mainty”.
Mampiseho ny lahatsary fanadihadiana antsoina hoe “Green Walls, Black Food” (Rindrina maintso, Sakafo Mainty) navoaka antserasera roa taona taorian'ny fampanantenan'ny governemanta Makedoniana hanatsara ny fepetran'ny tranom-panjakana fatorian'ny mpianatra fa tsy dia nisy ny fampandrosoana natao.
Nitantana sy nanonta ny horonantsary i Sandra Gjorgieva, mpianatra ao amin'ny sampam-pianarana Kanto Teatra ao Skopje, izay nanoratra ny rafi-tantara. Ao amin'ny famariparitana amin'ny YouTube, nilaza izy fa ny olana lehibe indrindra sendra azy nandritra ny fanatontosàna ny fanadihadiana dia ny tahotra. Na dia te-hitaraina manokana momba ny fepetra mahafadiranovan amin'ny foto-drafitrasa aza ireo mpianatra, matahotra izy ireo hiresaka anoloan'ny fakan-tsary:
Ny fampisehoana ity efitrano fatorian'ny mpianatra ity dia fanehoana ny efitrano rehetra fatorian'ny mpianatra ao Makedonia. Rindrina maintso, sakafo mainty, rano mangatsiaka, efitra sy toeram-pivoahana simbasimba. Izany no sary isan'andron'ny mpianatra izay tsy avy ao an-drenivohitra ary tsy manam-bola handoavana hofan-trano.
Taloha ela be, toeram-pandraisana ireo mpianatra manerantany ity tranobe goavana ity, nahazo ny lokan'ny Mari-trano Tsara Indrindra izy. Henatra ho an'ny mpianatra monina ao izany ankehitriny. Ny tena olana dia ny fahalainana sy ny tahotry ny mpianatra hiresaka ny fepetra iainan'izy ireo ao. Fanokafana ny mason'ny vahoaka ity horonantsary ity ary antso ho an'ny mpianatra mba hifoha sy hitaky ny zon'izy ireo honina anaty trano sahaza.
Ahitana antsafa niarahana tamin'ilay mpahay maritrano Gjorgji Konstantinovski, namorona ny trano fatorian'ny mpianatra sy nahazo loka marobe tamin'izany tamin'ny taona 1970s ny horonantsary. Hoy izy rehefa avy nahita ny lahatsary:
Satria miahy ny zanany ny renim-pianakaviana, miahy ny asanay sy ny kantonay ihany koa izahay mpahay mari-trano. Raha nahita ny zanako ao anatin'izany toe-javatra izany aho, raha nahafantatra ny fandehany, azonao an-tsaina ve ny tsapako? Mahatsiravina!
Tamin'ny 2014, nitantara momba ny Hetsika Trano Fatorian'ny Mpianatra ny Global Voices, hetsika natomboky ny vondrona mpikatroka nomerika monina ao amin'ny Trano Fatorian'ny Mpianatra Goce Delchev ao Skopje. Tamin'ny volana Martsa tamin'izany taona izany, namoaka sary mikasika ny fepetra iainan'izy ireo tao amin'ny bilaoginy sy tao amin'ny fifampizaràna sary imgur.com izy ireo. Navoakan'ireo tranonkalam-baovao vahiny maromaro indray izany rehefa avy eo.
Raha heverina ho “ara-dalàna” ao Makedonia izany fepetra iainana izany ary tsy noraharahian'ny manam-pahefana nandritra ny taona maro, nahatonga azy ireo hanao zavatra [mg] ny fahatafintohinana iraisampirenena – saingy tsy maintsy natao aloha ny fandrahonana mpianatra (toy ny fametahana anarana azy ireo hoe “mpamadika”) sy ny fanakanana ny adihevitra (notapahana ny fidirana amin'ny Facebook sy ny tranonkala hafa ho an'ny mponina ao amin'ny trano fatorian'ny mpianatra).
Tamin'ny volana Aprily 2014, nampanantena hanamboatra tanteraka ny Goce Delcev, efitrano fatorian'ny mpianatra malaza indrindra, izay mampiantrano mpianatra 1200 mandritra ny vanin-taona mafana ny governemanta, ary nanomboka nanao tolo-bidy amin'ny fanamboarana. Azon'ny orinasa manana fifandraisana mivantana amin'ny antokon'ny fitondrana ny tolo-bidy.
Tamin'ny Septambra 2015, nitatitra ny tranonkalam-baovao tsy miankina Kosovo 2.0 fa nirodana ny tafon'ny efitrano iray ao Goce Delcev, niteraka adihevitra indray momba ny olana amin'ny fenitra fampiantranoana mpianatra.
Roa taona mahery tatỳ aoriana, ny ampahefatry ny efitra fatorian'ny mpianatra antsoina hoe “Sampana B” no nasiam-panamboarana. Nanao fampanantenana ireo mpanao politika eo amin'ny fitondrana fa hamboarina amin'ny faramparan'ny taona 2016 na amin'ny 2017 ireo sampana telo hafa.
Pikantsary miaraka amin'ny lahatsoratr'i Gjorgji Konstantinovski tamin'ny lahatsary fanadihadiana “Rindrina maitso, sakafo mainty.” Hoy ny vakin'ny soratra: “Amin'ny dingana tsirairay raisin'ny mpianatra ao, tokony hanatsoaka lesona izy. Tokony hianatra ny fahatsarana sy ny estetika izy, tokony hianatra ny kanto.”